Preeclampsia ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း | ကြေးနန်းသတင်း
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » ကြေးနန်းသတင်း » Preeclampsia သည် မည်သည့်ကိုယ်ဝန်ကိုမဆို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Preeclampsia သည် မည်သည့်ကိုယ်ဝန်ကိုမဆို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Preeclampsia၊ ကိုယ်ဝန်၏သွေးတိုးရောဂါသည် လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး မိခင်၏ဆိုးရွားသောရလဒ်များနှင့် မိခင်သေဆုံးမှုတို့ကို ဖြစ်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ယခု မေလတွင်၊ Preeclampsia ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အမေရိကန်အခြေစိုက် လူနာထောက်ခံအားပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Preeclampsia ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း မည်သူမဆို မည်သူ့ကိုမဆို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအားလုံးသိကြောင်း သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Preeclampsia ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း preeclampsia ၏လက္ခဏာများနှင့် ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း အမျိုးသမီးများအား ပညာပေးရန်အတွက် မေလတိုင်းတွင် ဦးဆောင်မိခင်ကျန်းမာရေးမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ၎င်းတို့ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် သားဖွားပြီးနောက် preeclampsia အတွက် “အန္တရာယ်ရှိ” ဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား သိရှိစေပါသည်။
Preeclampsia သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကိုယ်ဝန် 1 ကြိမ်လျှင် 12 ဦးခန့်တွင် ဖြစ်ပွားပြီး အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး၊ အရင်းအမြစ်များ လက်လှမ်းမီမှု၊ လူမျိုးရေး၊ သို့မဟုတ် လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်း မခွဲခြားဘဲ အမျိုးသမီးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမအကြိမ်ကိုယ်ဝန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် မိသားစုရာဇဝင်၊ သွေးတိုးရောဂါ သို့မဟုတ် ယခင်ကိုယ်ဝန်တွင် preeclampsia ရှိသော်လည်း အန္တရာယ်အချက်များမရှိသော အမျိုးသမီးများတွင်လည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
"လောလောဆယ် preeclampsia အတွက် ပျောက်ဆေးမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် လက္ခဏာများနှင့် ရောဂါလက္ခဏာများကို သတိပြုမိခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများထံ ယူဆောင်ကာ ရလဒ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ပိုမိုအနီးကပ် စောင့်ကြည့်နိုင်သည်" ဟု Preeclampsia Foundation CEO Eleni Z. Tsigas မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ .
2022 Preeclampsia Awareness Month လှုပ်ရှားမှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများပေါ်ရှိ Preeclampsia ၏ လက်တွေ့ဘဝဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို BMJ Open တွင် မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Preeclampsia Registry “Patient Journey” လေ့လာမှုမှ တွေ့ရှိချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။
preeclampsia အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများနှင့်အတူ မကြာခဏဆိုသလို စိတ်ဆိုးတာက 'အန္တရာယ်တွေကို သိစေချင်တယ်' ဒါမှမဟုတ် 'လက်တွေ ရောင်ရမ်းတာက ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ ကျွန်မထင်တယ်' တဲ့။
“ကျွန်ုပ်တို့၏ Patient Journey လေ့လာမှုမှ ရလဒ်များသည် အမျိုးသမီးများ တွေ့ကြုံခံစားရလေ့ရှိသော အဆင့်များကို သရုပ်ဖော်သည်။ ဤအချက်အလက်သည် ၎င်းတို့၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကို ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကူညီနိုင်စေပါသည်” ဟု လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာ ဒေါက်တာ Ellen Seely၊ Brigham and Women's Hospital, Boston, Mass.
၎င်းတို့၏ မစ်ရှင်၏ ရှေ့တန်းတွင် ဆက်လက်ရှိနေသော သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအား Patient Journey ကဲ့သို့သော လေ့လာမှုများတွင် ပါဝင်ရန် အားပေးပါသည်။
Preeclampsia Foundation စီအီးအိုနှင့် လေ့လာမှု ပူးတွဲရေးသားသူ Eleni Tsigas က "ဒီလေ့လာမှုက preeclampsia ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ လူနာတွေကို ရောဂါရှာဖွေမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကုသမှုနဲ့ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေကနေတစ်ဆင့် ဘယ်လိုရွေ့ပြောင်းတယ်ဆိုတာကို 'မြေပုံ' မှာပြသဖို့ ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ "လေ့လာမှုသည် ရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ အသုံးပြုနိုင်သည့် မျှဝေလူနာအတွေ့အကြုံတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော နာကျင်မှုအချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။"
လတစ်လျှောက်လုံးတွင်၊ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများသည် #anypregnancy နှင့် #preeclampsia တို့ကိုလိုက်နာပြီး preeclampsia ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သောအထူးပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများဆက်တိုက်ပါဝင်သည့်လူမှုမီဒီယာပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်အားပေးပါသည်။ လူနာနှင့် ပံ့ပိုးပေးသူ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်များနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်များဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.preeclampsia.org/awarenessmonth တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Tsigas က "ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည် အကြောင်းရင်းနှင့် ကုထုံးကို အမြဲရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအတောအတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကိရိယာက ပညာရေးပါပဲ။”
ဤစာမူအတွက် tags မရှိပါ။
ယခုအခါ Endometriosis ကို စနစ်ကျသောရောဂါအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။
psoriatic ရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအသစ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောဂါဗေဒအသစ်သည် အစောပိုင်းအဆင့်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်...
Johnny Depp - Amber Heard အသရေဖျက်မှုဖြင့် ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း...
ကမ္ဘာမြေသို့ ပြင်ပမှ သတ္တဝါများကို ကြိုဆိုမည့် သံရုံးသစ်...
Nitrosamine iImpurity ကြောင့် Apo-Acyclovir ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
စိုးရိမ်စိတ်နှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာ
အစားအသောက်သမားများသည် Kentucky Derby ကို မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
အရိုးနုနှင့် Osteochondral ချို့ယွင်းချက်များအတွက် Implant အသစ်
သဘာဝသေမင်းဆဲလ်များကို တွန်းလှန်ရန် အစွမ်းထက်စေသောကုထုံးများ...
Solid Tumors အတွက် ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက်အသစ်
Wilson's အတွက် ပထမဆုံး ကုသမှုကို FDA က ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် သူစိမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း နှစ်ဆကျော်...
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသော ဖြည့်စွက်ဆေးအသစ်
စျေးပေါသော အသားဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာသည်။
AI နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ အစောပိုင်းအဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေခြင်း။
ခံတွင်းကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
Taco Bell Favourite ပြန်ရောက်ပါပြီ- မက္ကဆီကန်ပီဇာ
ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ လေ့လာမှုတွင် ပထမဆုံး လူနာအား ဆေးသောက်သည်။
FDA မှ လူနာများအား ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာများ ကုသပေးခြင်း...
အယ်လ်ဇိုင်းမားအသင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် စိတ်ပျက်...
သွေးထဲတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန်အမွှားများကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Liquid ပုံစံဖြင့် Butt Lift အသစ်
အကြားအာရုံရှိသူများအတွက် စာတန်းထိုးထားသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအက်ပ်အသစ်...
Cystic Fibrosis အတွက် ကုထုံးအသစ်နှင့် နီးကပ်သော ခြေတစ်လှမ်း
အစီရင်ခံစာသစ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သော အံ့အားသင့်ဖွယ် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသမည်
FDA မှ ပထမဆုံး COVID-19 ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု...
လေ့လာမှုအသစ်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုပို၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်...
Tai Chi လေ့ကျင့်မှုသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
Brain Implant သည် ALS Paralysis ကိုကူညီနိုင်သည်။
ဂျပန်ရော့ခ်စတား ​​Yoshiki တွင် လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုရှိသည်။
6:2022 မှာမေလ 12, 05
Bivši i ja smo prekinuli prije godinu i2mjeseca,aja sam bila u šestom mjesecu trudnoće။ Oboje se volimo i to je za mene bio šok i stvarno mi je slomilo srce။ Pokušao sam ga nazvati i obje su linije သည်းခြေ prekinute။ Pokušao sam doći do njega na društvenim mrežama, ali me maknuo s njih။ Pokušala sam doći do njegovih roditelja i oni su mi rekli da je njihov sin rekao da me ne voli i da me ne želi vidjeti i da ne znaju što nije u redu. Svaki dan sam plakala i plakala jer sam ga jako voljela။ Dok nisam rodila i beba nije imala godinu dana, nisam mogla vratiti svoju ljubav။ Opet sam bio zbunjen Ne znam što da radim,aostala sam i bez posla i nemam novca za brigu o bebi။ Bila sam jadna u životu pa sam plakala sestri i rekla joj svoj ပြဿနာ i rekla da zna za moćnu čaroliju koju je bacila dr alaba koja joj pomaže kad nije mogla zatrudnjeti. Kontaktirala sam ga putem e-pošte i rekao je da će mi pomoći i rekao mi je da je žena stavila urok na mog muža i rekla da će mi pomoći da razbijem čaroliju kako bi mi se moj muž zauvijek vratio bit mojće Bilo mi je veliko iznenađenje što se dogodilo sve što je rekao. Muž mi se odmah vratio i rekao mi da mu oprostim. Puno hvala ovom moćnom i istinskom čarobnjaku။ Molim se da će dugo živjeti i raditi više od svog prekrasnog djela. Ako imate ပြဿနာ koji vas muči u životu, obratite se ovom moćnom igraču čarolija! On ti može pomoći။ Neće vas iznevjeriti, možete ga dobiti putem gmail လိပ်စာ- [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ili ga možete dobiti putem njegovog vibera/whatsappa: +1(425) 477-2744